Sahan Maraykan ah, daabacaadda Jannaayo 2008 - Geofumadas
Sahan Maraykan ah, Janaayo 2008 Edition
Janaayo, 2008 topografia
Daabacaadda cusub ee Surveyor Mareykan ah bisha Janaayo ee 2008 ayaa hadda la daabacay.
Waxay leedahay mawduucyo badan oo danta guud ah ee injineerada iyo sahamiyeyaashu, si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa mid qiimo leh oo lagu badbaadinayo maqaalkan ku saabsan TopoCAD 9, halkaas oo ay muujinayso inta badan awoodaha uu leeyahay barnaamijkani.
Mowduucyada kale, waxay ka hadlaan ballanqaadka adeegga xirfadeed, wax ku saabsan nolosha Rendezvous, dib u eegista GPS Nomad iyo kan ugu fiican ee shirarka Leica ee 2007.
Waxaad ka aqrisan kartaa qodobbada bogga Baaraha Mareykanka ama waxaad kala soo bixi kartaa qaab PDF leh sawirada lagu soo daray sida qaabeynta daabacaadda daabacan.
Post Previous«Previous Maxaad ka fileysaa Geospatial for 2008?
Post Next Sida loo dhigo xayeysiiska khariidadahaNext »